Wadooyinka Muqdisho qaarkood oo Maanta xiran - Awdinle Online
Wadooyinka Muqdisho qaarkood oo Maanta xiran
Ciidamada Ammaanka Soomaaliya ayaa Maanta waxaa ay xireen qaar kamid ah wadooyinka muhiimka ah ee Magalada muqdisho, iyaga oo u diidaya Gaadiidka daweynaha iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay iyo Mooto Bajaajta inay wadooyinka qaar isticmaalaan.
Sababaha Maanta loo xiray wadooyinka muhiimka ah ee Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in laga cabsi qabo in maanta banaanbaxyo iska soo horjeedda ay ka dhacaan Muqdisho.
Banaanbax lagu taageerayo dowladda Soomaaliya ayaa abaabulkiisa waxaa uu ka socda Muqdisho, iyadoo saakay la arkayay haween isku soo baxay wadooyinka qaar ee Muqdisho.
Warar aan la xaqiijin ayaa sidoo kale tilmaamaya in maanta musharaxiinta Mucaaraadka ah ay abaabulayaan banaanbax ka dhan dowladda Soomaaliya.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo xiriirka u jartay Kenya
Next articleMadaxweynaha Somaliland & Uhuru Kenyatta oo Maanta markale kulmaya